दशैंमाथि ‘रुन्चे बादल’ ! – सजल सन्देश
दशैंमाथि ‘रुन्चे बादल’ !
By Sajal sandesh	 On१३ आश्विन २०७६, सोमबार ०१:३२
काठमाडौं – निरन्तररूपमा जारी रहेको वर्षा अझै केही दिन सक्रिय हुने भएको छ। यसपटक अझै मौसम सक्रिय रहेकाले दशैंसमेत प्रभावित हुने भएको छ।
सोमबारको राशीफल : कुन राशी हुनेको भाग्यफल कस्तो छ ? हेर्नुस्
तीन वर्षपछि नयाँ नोट वितरण पूर्णरुपमा रोक्ने राष्ट्र बैंकको तयारी